गाउँपालिका प्रहरीका लागि ५४ जनाको दरखास्त - Kantipath.com
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले नियुक्त गर्न लागेको गाउँपालिका प्रहरी भर्नाका लागि ५४ जनाको दरखास्त परेको छ ।
गाउँपालिका प्रहरी भर्नाका लागि गाउँपालिकाले हप्ता दिनको म्याद दिएर दरखास्त आह्वान गरेपछि ५४ उम्मेदवारको आवेदन परेको हो ।
हवल्दार वा प्रहरी जवानका उम्मेदवार १८ वर्ष पूरा गरी ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने गाउँपालिकाको मापदण्ड छ । उम्मेदवारको आँखा माइनस २ वा प्लस २ भन्दा बढी कमजोर नभएको र शारीरिकरूपमा स्वस्थ हुनुपर्ने गाउँपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । गाउँप्रहरीसँगै चार अहेव (सहायक चौथो) र तीन अनमी (सहायक चौथो) नियुक्तिका लागि समेत दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाले गत वर्ष नै तीन जना गाउँपालिका प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ ।
नेकपाको श्रम शिविर
जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०ले श्रम शिविर सञ्चालन गरेको छ । गत असोज १८ र १९ गतेको नेकपा जिल्ला सचिवालय समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेकपाको गाउँपालिकास्तरीय समितिले एकदिने श्रम शिविर सञ्चालन गरेको हो ।
जिल्ला सचिवालय समितिको निर्णयलगत्तै असोज ३० गतेको गाउँपालिका समितिको अर्को निर्णयानुसार उक्त गाउँपालिकाको सबै वडामा एकैदिन श्रम शिविर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका समिति अध्यक्ष यामकुमार राईले बताए । श्रम शिविरअन्तर्गत सडक तथा गोरेटो बाटो मर्मत गरिएको जनाइएको छ ।
नेकपाको गाउँपालिका समितिको समन्वयमा सम्बन्धित वडा समितिको अगुवाइमा वर्षाका कारण बिग्रे÷भत्केका सडक तथा गोरेटो बाटो मर्मतसम्भार गरिएको जनाइएको छ । नेकपाले वडा नं १ देवीस्थानमा मैनटारबाट सिक्किमटार जोड्ने सडक मर्मत गरेको छ । सो सडक वर्षाको पहिरोले भत्काएको थियो ।
यस्तै देवीस्थानकै खनियाबासबाट रिला जोड्ने सडक र गोरेटो बाटो मर्मत गरिएको छ । वडा नं २ बोपुङमा ह्युराङदेखि पाँडेगाउँ जाने सडक मर्मत गरिएको नेकपाले जनाएको छ । बङ्शिलाघाट जोड्ने ह्युराङ–पाँडेगाउँ सडक गत कात्तिक ९ गते परेको भारी वर्षाले भत्किएको थियो । नेकपाले सञ्चालन गरेको श्रम शिविरका माध्यमबाट पहिराले भत्काएको सडकको पर्खाल लगाइएको छ ।
यस्तै वडा नं ३ काहुलेमा सालम्बुबाट बुँवाखोलासम्मको सडक मर्मत गरिएको छ । वडा नं ४ डम्वर्खुशिवालयमा कुइभिर भञ्ज्याङखर्क सडकखण्डको एक किलोमिटर खण्ड मर्मतका साथै नाली काट्ने काम गरिएको छ । वडा नं ५ चिसापानीमा सुरुङ्गेलबाट मैदानसम्मको दुई किलोमिटर लामो पुरानो गोरेटो बाटो मर्मत गरिएको जनाइएको छ । वडा नं ६ दिप्लुङमा ऐतिहासिक एवं पर्यटकीयस्थल जन्तेढुङ्गाको परिसर सरसफाइ गरिएको नेकपा गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । श्रम शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक ७६ वर्षीय लक्षुमान रोइलाको समेत सहभागिता थियो ।
Previous Previous post: मन्त्रिपरिषद मै अड्कियो ५ डिआईजी थप्ने प्रस्ताव : यी हुन् दाबेदार !
Next Next post: कोरोना प्रभाव : बादी समुदायको मादल बनाउने पेशा सङ्कटमा
विषालु च्याउ खाँदा एकै परिवारका ६ जना बिरामी
पत्रकार रविन्द्र गौतमको निधन
‘अबको ५० वर्ष कम्युनिष्टको सरकार’ : अध्यक्ष प्रचण्ड
होसियार ! सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनविरोधी गतिविधि त गर्दै हुनुहुन्न ?